Warshadda Shiinaha ee Anti-Slip Pad Mat iyo soosaarayaasha | SJJ
Soodhka lidka-lidka ama gogosha ayaa ku hayn kara taleefankaaga gacanta, muraayadaha indhaha, furayaasha iyo wixii kale ee ku yaal muraayadda baabuurkaaga adiga oo aan simbiriirixan markaad baabuurka waddo. Waxa kale oo aad ku isticmaali kartaa jikadaada, musqushaada iyo xafiiskaaga si aad wax u sii haysato. Waa hadiyad ku habboon dhiirrigelinta, qaddarinta, xayaysiinta, xusuusta ...
Soodhka lidka-lidka ama gogosha ayaa ku hayn kara taleefankaaga gacanta, muraayadaha indhaha, furayaasha iyo wixii kale ee ku yaal muraayadda baabuurkaaga adiga oo aan simbiriirixan markaad baabuurka waddo. Waxa kale oo aad ku isticmaali kartaa jikadaada, musqushaada iyo xafiiskaaga si aad wax u sii haysato. Waa hadiyad ku habboon dallacsiinta, qiimaha, xayeysiinta, xusuusta, qalabka baabuurka iyo qurxinta. Waxa kale oo loo isticmaali karaa sida qashin -qubka ama suufka guriga, xafiiska, ama dugsiga.
Ka samaysan sun aan sun lahayn, PU Gel oo aan ur lahayn iyo PVC jilicsan, ma noqon doonto wax isbeddel iyo jab
Iyada oo leh awood-qaadasho xoog leh, ka-hortag iyo ka-hortag la'aan
Si sahlan loo isticmaalo, looma baahna koollo ama magnet
Dib loo isticmaali karo, la saari karo, la dhaqi karo oo la qaadan karo
Hore: Taleefoonada Taagan & Kaarka haysta
Xiga: Suunka Telefoonka Dib